सुस्मिताले नि`धन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, घट`नामा अरु पनि सं लग्न ! (भिडियो हेर्नुस्) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/सुस्मिताले नि`धन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, घट`नामा अरु पनि सं लग्न ! (भिडियो हेर्नुस्)
सुस्मिताले नि`धन हुनुअघि लेखेको डायरी प्रहरीको हात लाग्यो, घट`नामा अरु पनि सं लग्न ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । छोरीको नि`धन भएपछि विक्षि`प्त बनेकी सुस्मि`ताकी आमा पहिलो पटक हेटौडा पुगेकी छन् । हेटौडा पुगेर प्रहरी प्रशा`सन, जन प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकार वाला निकायलाई भेटेर आए पछि उनको अवस्था थप वि’क्षि’प्त भएको छ । उनी वेहोस भएर ढले पछि आफन्तले उनलाई उठाइरहेको देखिन्छ ।
छोरी लाई बेहुली बनाएर पठा`एको त्यो हेटौं`डामा पाइला राखेपछि मैले आफु`लाई सम्हा`ल्नै सकिन्, उनले भनिन् संधै म हे`टौडा गएपछि मेरो नानीलाई घर लिएर आउँथे तर आज रित्तै आउनु पर्यो । वाटो भरी नानीको याद मात्र आयो । उनले आफुलाई प्रहरी र जन प्रतिनिधिले घट`नाको सत्य तथ्य वाहिर ल्याउने प्रति`वद्धता जनाएको बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, मलाई प्रहरी इन्सपेक्टर, मेयर उपमेयरले घट`नामा दोषी उम्क`न्छ की भन्ने कुरा मनमा कतै पनि नरा`ख्नु होला । हामी दोषीको एक दम नदिन पुगेका छौं अनुसन्धान जारी भएकाले सबै कुरा अहिले नै भन्न मिल्दैन । अब २ दिनमा सबै कुरा बाहिर आउँछ । उनले आफु लाई प्रहरी प्रशासनले केही दिनमै घट`नाका बारेमा सबै कुरा बाहिर आउने कुरामा विश्व“स्त हुन आग्रह गरेको बताएकी छन् ।
उनले अब त्यो वाटोमा आफु हेर्न पनि नसक्ने अवस्था`मा पुगेको बताइन् । उनले केही दिन पनि छोरी`लाई कुर्न नसक्ने म आज जिवन भर छोरीलाई कुर्दा पनि देख्न नपाउने भएं उनले रुँदै भनिन् । उनले यो घट`नामा वुवा र छोरी मात्र होइन यो घट`नामा अरु पनि सहभागी भएको हुन सक्ने बताएकी छन् । उनले भनिन्, त्यो ससुराले म अब वृ`द्ध भइसके म जे`लमा बसेपनि केही हुन्न भनेर अरु लाई जोगाउन सक्छ । मलाई घट`नामा ससुरा र न`न्द मात्र संल`ग्न छन् भन्ने लाग्दैन ।